नि:शुल्क औषधि बेच्दै सरकारी अस्पताल • nepalhealthnews.com
नि:शुल्क औषधि बेच्दै सरकारी अस्पताल
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ || प्रकाशित मिति :2019-04-16 04:34:29
जनताको सेवाका लागि सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क औषधि बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले बेचेको छ । कुकुरले टोकेपछि लगाउनुपर्ने रेबिजविरुद्धको औषधि अस्पतालले सरकारबाट निःशुल्क लिएर बिरामीलाई बेचेको हो । १५ वर्षमुनि उमेरका व्यक्तिलाई ४ र १५ वर्षमाथिकालाई ५ वटा सुई लगाउनुपर्छ । अस्पतालले प्रतिसुई सय रुपैयाँ लिने गरेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनालले स्विकारे ।
रेबिजविरुद्धको निःशुल्क सुईमा समेत रकम उठाउने गरेको अस्पतालले स्विकारेको अनुगमन टोलीका प्रमुख तथा महाशाखाका मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट धनप्रसाद पौडेलले बताए । ‘विकास समितिबाट नियुक्त भएका कर्मचारीले सेवा–सुविधाका लागि भन्दै औषधि बिक्री गरेको अस्पतालले स्विकारेको छ, तर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन निःशुल्क औषधिको व्यापार गर्न मिल्दैन,’ पौडेलले भने, ‘हामीले तत्काल सच्याउन निर्देशन दिएका छौँ, स्थानीय तह र प्रदेशले पनि चासो दिनुपर्छ ।’ तर, सुपरिटेन्डेन्ट डा. खनाल भने सेवाबापतको रकम भएकाले नलिने निर्णय गर्न नसकिने बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमै मलेरियाको निःशुल्क औषधि दुई वर्षदेखि अस्पतालकै भण्डारमा रहेको सार्वजनिक भएको छ । औषधिको म्याद सकिन एक महिना मात्रै बाँकी छ । तर, अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कृष्ण खनाल भने दुई वर्षदेखि मलेरियाको औषधि भण्डारमा थन्किएकोबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् । ‘अहिले टोली आएर सोधपुछ गरेपछि मात्रै थाहा भयो, तर औषधिको म्याद जान जम्मा एक महिना बाँकी रहेछ,’ उनले भने, ‘अहिले निःशुल्क बाँड्न थालेका छौँ ।’
जिल्ला अस्पताल कालिकोटमा निःशुल्क औषधि कति छन् र बिरामीलाई दिने निःशुल्क औषधि कुन–कुन हुन् अस्पताल प्रमुख डा. भीष्म पोखरेललाई नै थाहा छैन । ‘सरकारले निःशुल्क दिने औषधि कति प्रकारका छन् मलाई थाहा छैन,’ डा. पोखरेलले भने, ‘सबै प्रकारका निःशुल्क औषधि अस्पतालमा छन् कि छैनन् पनि हेर्न बाँकी नै छ । अहिलेसम्म लिस्ट नै हेरेको छैन ।’
जनकपुर अञ्चल अस्पतालको औषधि वितरण शाखाको भित्तामा १४ आयुर्वेदिकसहित ६१ प्रकारको औषधि निःशुल्क उपलब्ध रहेको सूचना टाँसिएको छ । तर, औषधिको र्‍याकमा १०–१५ प्रकारका बाहेक औषधि देखिँदैनन् । औषधि वितरण शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीले बिरामी निःशुल्क औषधि माग्न आउँदा दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । यो अस्पतालमा एसिल्क १५० एमजी, मेगापेन २५० एमजी, एसिनेट (पेनकिलर) १०० एमजी, डाइलोना सुई अभाव भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो ।
काभ्रे जिल्लाको एक मात्र सरकारी अस्पताल मेथिन्कोटमा ४५ प्रकारका निःशुल्क औषधि अभाव छ । २५ प्रकारका औषधि मात्रै बिरामीलाई दिन सकिएको डा. शशीकुमार यादवले बताए । अस्पताल प्रमुख मुक्तिराम श्रेष्ठले ६ महिनाअघि नै राजीनामा दिएको र निमित्तको जिम्मेवारी कसैले नपाएकाले टेन्डर आह्वान गर्न नसक्दा औषधि अभाव भएको डा. यादवको दाबी छ ।
अस्पतालमा उनी मात्रै डाक्टर भएकाले बिरामीलाई उपचारमा त समस्या छ नै, घन्टौँ पालो कुरेर उपचार गरेपछि बिरामी औषधि नपाएर मेडिकलतिर जान बाध्य छन् । ‘निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन नसक्दा उपचार गर्न आएका बिरामी फर्काउनुपरेको छ,’ डा. यादवले भने, ‘कर्मचारीको समेत अभावले यहाँ त डाक्टर पनि आफैँ, सुरक्षा गार्ड पनि आफैँ हुनुपरेको अवस्था छ ।’ मेथिन्कोट अस्पतालमा दरबन्दी भने पाँच डाक्टरको छ ।
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क जिल्ला अस्पतालमा ४० प्रकारका निःशुल्क औषधि छन् । तर, नगरपालिकाले खरिद गरेर दिने औषधिको परिमाण निकै कम भएकाले इमर्जेन्सी चलाउनसमेत गाह्रो भएको अस्पताल प्रमुख डा. जगन्नाथ तिवारी बताउँछन् । ‘स्थानीय तह बनेपछि, स्वास्थ्य संस्थाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छैन, नगरपालिकाले खरिद गर्ने औषधिले इमर्जेन्सी चलाउनसमेत गाह्रो छ,’ उनले भने । सन्धिखर्क नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पूर्ण पराजुलीले गत वर्ष नौ लाख रुपैयाँको औषधि टेन्डर प्रक्रियाबाटै खरिद गरेको र यस वर्ष पनि १५ लाखको औषधि टेन्डरबाटै नै खरिद गरेको बताए ।नयाँपत्रिकाबाट